ကမ္ဘာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ၁၄ သန်း ကျော်လာ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ကမ္ဘာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ၁၄ သန်း ကျော်လာ
epa08353125 Medical workers treatapatient with COVID-19 in the intensive care unit at the Geneva University Hospitals (HUG) during the state of emergency of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Geneva, Switzerland, 09 April 2020. Countries around the world are taking increased measures to stem the widespread of the SARS-CoV-2 coronavirus which causes the Covid-19 disease. EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI DIGITALLY ALTERED, PATIENT NAME IS PIXELISED
ကမ္ဘာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ၁၄ သန်း ကျော်လာ
ကမ္ဘာတလွှားမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုက ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ နေ့လည်မှာ ၁၄ သန်း ကျော်လာပြီလို့ ဂျွန်စ် ဟော့ပ်ကင်း တက္ကသိုလ်က နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဖက်ဒရယ်နဲ့ ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်တွေဆီက အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြပါတယ်။
အခုအထိ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်သူ ၁၄၀၃၇၀၀၀ ကျော်နဲ့ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၀၀၆၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်က COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်သူ ၃၆၃၈၀၀၀ ကျော်နဲ့ အများဆုံး၊ ဘရာဇီးက ၂၀၄၆၃၀၀ ကျော်နဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး၊ အိန္ဒိယက ၁၀၀၃၈၀၀ ကျော်နဲ့ တတိယ အများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။
ရုရှားကတော့ စတုတျထနရောမှာ ရှိနပေါတယြ။ ရုရှား ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြ တိုကဖြကွရြေး ဌာနခွုပရြဲ့ ထုတပြှနခြကွအြရ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြ ကူးစကသြူ ၇၅၉၀၀၀၊ ပှနလြညြ သကသြာလာသူ ၅၃၉၃၀၀၊ ရောဂါကှောင့ြ သဆေုံးသူ ၁၂၁၂၃ ဦး ဖှဈပါတယြ။
ကမ်ဘာမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု ၁၄ သနျး ကြောျလာ
ရုရှားကတော့ စတုတ္ထနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ရုရှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး ဌာနချုပ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၇၅၉၀၀၀၊ ပြန်လည် သက်သာလာသူ ၅၃၉၃၀၀၊ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၂၁၂၃ ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleသုတေသီတွေက COVID-19 ရောဂါ လက္ခဏာကို အုပ်စု ခြောက်ခု ခွဲခြား
Next articleရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှု စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်နေကြောင်း တပ်မတော် ကြေညာ